Ny zava-misy ao ambadiky ny tetikasa famolavolana - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Ny zava-misy ao ambadiky ny tetikasa famolavolana
Jose Angel | | Graphic Design, General
Amin'ny fotoana maro dia misy ny fironana hanatsara ny asa mifandraika amin'ny endrika sary sy tranonkala. Ary na dia tsy misy fisalasalana aza fa iray amin'ireo asa izay matetika manome fahafaham-po indrindra amin'ny sehatra manokana, araka ny antenaina, dia tsy tsara loatra izany rehetra izany satria toa avy any ivelany. Amin'ny fahitana voalohany. Ny zava-misy amin'ny tetikasa famolavolana dia matetika samy hafa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka kely momba izay ao ambadiky ny tetik'asa maro isika sary sy / na famolavolana tranonkala. Inona no hitantsika raha vao manomboka miasa ho an'ny tena tetikasa sy mpanjifa isika.
Ireo voalaza rehetra etsy ambony ireo dia tsy mandray an'ity lahatsoratra ity ho fitsikeran'ny mpamorona marikivy lavitra azy.. Heveriko fa ny ankamaroan'ny endrika, ny asa horaisina sy vita dia entina am-pitiavana be. Ary ity, fanamby hatrany ny fitrandrahana ny famoronana na dia amin'ireo sehatra tsy manome toerana firy ho an'ny famoronana aza.
1 Tetikasa famoronana lehibe, izay tsy dia izany loatra
2 Maika ny mpanjifa
3 Mahitsy, mahitsy ary marina kokoa
4 Mihevitra ny mpanjifa fa mpamorona izy
5 Volavola tsara sy azo ampiharina
Tetikasa famoronana lehibe, izay tsy dia izany loatra
Ny mpanjifa dia tsy vonona hamorona endrika vaovao sy be famoronana. Izany dia rehefa voafetra ny hevitry ny mpanjifa ny fanapahan-kevitrao. Ankoatr'izay, ireo fetra ireo dia matetika atolotry ny mpanjifa tsy manana hevitra matihanina kely. Fa inona no mihoatra mahasosotra. Ary vitsy ireo izay sahy manana izany hevitra izany. Izany dia vokatry ny antony maro:
Tsy manam-bola hampiasa vola ny mpanjifa. Ny orinasa kely iray dia tsy maintsy mametra ny tenany amin'ny lafiny maro. Fa tsy orinasa kely fotsiny no hametra anao. Orinasa lehibe dia mila kopia maro. Raha ny karatry ny fandraharahana dia tokony ho hitan'ny orinasa tsara ny fomba mendrika handaniany izany vola izany
Orinasa manana endrika orinasa voafaritra tsara izy io ary tsy te hiala amin'ny tsipika efa noforonina izy ireo. Raha be indrindra, manaova restyling, fa kely ihany, satria ireo mpitantana ambony ny orinasa, matetika tsy fahazarana, dia tena tsy sahy manova ny sary.
Amin'ny teôria dia mety hahagaga tokoa izy io fa rehefa tonga ny fotoana hisamborana ny endrika amina endrika ara-batana, aleon'ny mpanjifa manao fomba konservatiora kokoa, noho ny tahotra sao hahatsapa ho "very" ilay mpampiasa.
Maika ny mpanjifa
Tsotra ity teboka ity, ny tetikasa dia mahalana no tsy mahamaika. Tianay rehetra ny hiasa voahodidin'ny rivo-piainana milamina ary tsy maimaika, izay ivoahan'ny famoronana, mandeha mitsangatsangana any anaty ala handinika ilay tetikasa sy ny maro hafa, fa ny marina dia mazàna ny mpanjifa mangataka fe-potoana tena tery. Mazava ho azy fa tokony "hiaro" ny asantsika isika ary farafaharatsiny mba hifanarahana, satria raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia tsy izany ihany no hampivelatra antsika, fa tetikasa bebe kokoa ary tsy maintsy mitady fotoana hampivoarana ny tsirairay amin'izy ireo isika.
Mahitsy, mahitsy ary marina kokoa
Rehefa tonga amin'io teboka io dia mety tsy hisy farany. Amin'ny maha-mpamorona anao dia tsy maintsy mametraka fanitsiana faratampony amin'ny mpanjifa ianao. Mety hahitsy ny fanitsiana roa farafahakeliny. Mazava ho azy fa raha tetikasa lehibe kokoa izy roa dia tsy ho ampy izy roa.
Tsy azo atao ny mamolavola sy manamboatra tranokala misy fanitsiana 2/3 fotsiny. Ny tanjona dia ny hampifaly ny mpanjifa ary raha miasa amin'ny vidiny ara-drariny isika, nefa tsy manome ny asantsika, izany dia mitaky fitakiana sasany avy amin'ny mpividy, izay tsy maintsy arahinay farafaharatsiny faran'izay azo atao. Anisan'izany ny fanaovana fanitsiana boribory, maro.
Raha ny mahazatra, arakaraka ny maha lehibe ny orinasa iasantsika, no mahamaro ny isan'ny fihodinana, satria toa sarotra kokoa ny fifampiraharahana.
Fa tsy ny fifampiraharahana rehetra no toy izaoAzo antoka fa hahita olona tena sarobidy aminao ny asanao. Amin'ity tranga ity dia azo antoka fa hiasa amin'ny hafanam-po sy hatsaram-panahy tsy manam-paharoa amin'ny mpanjifa ianao.
Mihevitra ny mpanjifa fa mpamorona izy
Somary mifandraika amin'ilay teo aloha, mahazatra ihany koa ny mahita mpanjifa "mametraka ny tanany" amin'ny famolavolana toy ny hoe misy mpamorona miondrika ao anatiny. Ireo dia hanolotra anao hanova ny volavola araka ny sitrapony ary amin'ny tranga ratsy indrindra dia hanery anao hanao izany izy ireo. Eny, azonao atao ny mandà ka mifamaly, fa ny zavatra tsotra indrindra dia rehefa manandrana mandresy lahatra azy ireo ianao fa tsy tsara ny hevitr'izy ireo dia mandroso amin'izay angatahiny ianao.
Volavola tsara sy azo ampiharina
Famoronana tsara tarehy tokana dia tsy misy ilana azy raha tsy misy dikany. Na logo, pejy web na katalaogy, ny endrika dia tsy maintsy mahafeno fepetra takiana.
Matetika io dia afaka manapaka ny elatry ny ampahany be famoronana indrindra ho mpamorona sary, fa ny tena marina dia mahazatra ny miasa amin'ireo orinasa manolotra vokatra na serivisy mety hampihena ny famoronana indraindray. Isika rehetra dia manonofinofy amin'ny miasa amin'ny tetik'asa ahafahantsika mampivelatra ny lafiny famoronana farany indrindra, fa ny tena izy dia vitsy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny zava-misy ao ambadiky ny tetikasa famolavolana
Ny jiro 10 mahaliana indrindra amin'ny herinandro famolavolana Milan
Fanesoana maimaim-poana 15 ho an'ny karatra fandraharahana miaraka amina endrika minimalist